အခန်း(၂) သုံးပါတီညီညွတ်ရေးလှုပ်ရှားမှု - Myanmar Political Research Organization
Home » history-4 » အခန်း(၂) သုံးပါတီညီညွတ်ရေးလှုပ်ရှားမှု
နိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာများ၊ စာနယ်ဇင်းများ သည် ဦးလောရုံ၏ စီမံပေးချက်အရ ပြည်ပြေးများ ဘက်မှရပ်တည်၍ ဆောင်းပါးပေါင်းများစွာကိုဖော်ပြ၍ ဝါဒဖြန့်ချိပေးကြသည်။ ပြည်ပြေးအုပ်စုသည် ကရင် သောင်းကျန်းသူဗိုလ်မြအုပ်စု၏ဘိနစခန်းတွင် ခိုကပ်၍ အမှီပြုနေရစဉ်တွင် အီယင်ဝပ်ဆိုသူက ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁၃ ရက်ထုတ် လန်ဒန်ဒေးလီး ဂရပ်(ဖ်)သတင်းစာ''ရန်ကုန်အုပ်စိုးမှုကို ဖြိုချရန် အတွက် မြန်မာသူပုန်များ၏စီမံချက်''*(Burma Rebels Plot to Overthrew Rangoon Regime.) အမည်ရှိ ဆောင်းပါးဖြင့် ပြည်ပြေးများကို ကြော်ငြာပေး လိုက်သည်။ အီယင်ဝပ်က ရေးသားရာတွင် ကရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များ၏ သုံးလကြာ ကွန်ဂရက်က တော်လှန်ရေးအစိုးရအား ဖြုတ်ချရန် မြန်မာသူပုန်များ (ပြည်ပြေးများ)နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း၊ ကရင်သူပုန်သည် အင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသည် ကရင်သူပုန်နယ်သို့ ပထမဦးဆုံးဝင်ရောက်ခွင့်ရသော သတင်းစာဆရာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ထင်ရှားသော ကရင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကိုကျွမ်းကျင်ပြီး ဂလက်စ်တုံး၊ စမစ်၊ ကင်း၊ ဖရီးမင်း၊ ဝီလ်ဆင်၊ ဂျော်လီ စသော အင်္ဂလိပ်အမည် များကို လိုလားလက်ခံကြကြောင်း၊ ကရင်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး** (ဗိုလ်မြကိုဆိုလိုသည်။ မှာ အမှတ် ၁၃၆ တပ်ဖွဲ့ (FORCE 136) မှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်သူပုန်များက ဦးနုကို ယုံကြည် ကြကြောင်း၊ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။*** (မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၉၊ ၁ဝ။)
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံဟောင်းဆာဒေါ်မန်စမစ်****(ဆာဒေါ်မန်စမစ်သည်၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန်၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင် ပါဝင်လာသည်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၉-၄ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံဖြစ်လာသည်။) ကလည်း လန်ဒန်ဒေးလီးတယ်လီဂရမ်(ဖ်) သတင်းစာသို့ ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ရာ အပြည့် အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်-*****(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၁၁ မှ ၁၄။)
ဒေးလီးတယ်လီဂရပ်(ဖ်)(ဧပြီ ၂ဝ၊ ၁၉၇ဝ)
မစ္စတာအီယင်ဝပ်၏ ဧပြီလ ၁၃ ရက်စွဲပါ ဦးဆုံး အစီရင်ခံစာနှင့် မစ္စတာအီယင်ဝပ်၏ ကိုယ်တိုင်အား ထိုတိကျသော အထူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အတွက် အထူးဝမ်းမြောက်ကြောင်း မေတ္တာစကားပါးလိုပါသည်။
ဗမာပြည်နယ်နိမိတ်သည် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ လာအို နှင့် ယိုးဒယားတို့ကဲ့သို့သော အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်အချက်ကို သတင်းစာဆရာ(သို့မဟုတ်) သတင်းစာများက အလေးထားဖော်ပြခြင်းမှာ ဤ အကြိမ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါသည်။ အကယ်၍သာ တရုတ်ပြည်သည် ရန်ကုန် သို့ ချီတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါမူ ယင်းချီတက်မှုကို တားဆီး ရန် အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ဘာမျှပင် ရှိလိမ့်မည်မဟုတ် ဟူသော ကြောက်လန့်ဖွယ် အတွေးပင် ဝင်မိပါသည်။
ကျွန်တော်တွက်ဆ၍ ရနိုင်သမျှဆိုပါက နေဝင်း၏ ဗမာပြည်သည် ပုလိပ်နိုင်ငံတစ်ခုသာလျှင် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဘုရင်ခံမင်းကြီးဖြစ်စဉ်က ကွန်မြူနစ်များ*(လွတ်လပ်ရေးမရခင်မှာပင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာမျိုးချစ်များ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်မန်စမစ်က လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းနေသော မြန်မာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်များအား ကွန်မြူနစ်များဟု စွပ်စွဲဟန်တူသည်။)ဟု အထင်အရှားဖြစ်နေသူများ လက်သို့အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လွှဲအပ်ပေးရ ခြင်းကို ကျွန်တော်၏ဆန္ဒနှင့် လွန်စွာဆန့်ကျင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဆွေများ** (ဗြိတိသျှအလိုတော်ရိများနှင့် ကရင်သောင်းကျန်းသူများ ကိုဆိုလိုသည်။) ကို အားကိုးရာမဲ့အဖြစ်စွန့်ခွာပြီးထား ခဲ့ကြပါသည်။
ကရင်လူမျိုးများနှင့် တောင်တန်းသားများက အလုံးစုံအာဏာပိုင်ဝါဒကို စစ်ခင်း ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်း မှာ မောင့်ဘက်တန် သို့မဟုတ် ဝင်းဂိတ်တို့အား မျက်နှာလိုအားရပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ အလျှော့ပေးရန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသောဆီဂရင်း၊ နိုဝဲလ်စတီဗင်ဆင် တို့အား အထူးတလည်ဂုဏ်ပြုခြင်းသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွေးပြီး တကယ်အားဖြင့် ကြောက်လန့်နေသည်မှာ အကယ်၍သာ သူတို့ကလိုလားပါက တရုတ် တို့သည် ဗမာပြည်၏ အဓိကအပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဘင်္ဂလားအော်အတွင်း၌ အခိုင်အမာခြေကုပ်ယူ နိုင်မည့် အရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုပါက လွန်စွာ ဆိုးရွားနိုင်ပေသည်။
ဘုရင်ခံဟောင်း ဆာရယ်ဂျီနယ် ဒေါ်မန်စမစ် သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်အန္တရာယ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးအား ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ကြရန် အနောက်နိုင်ငံများသို့ တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံကြီးများသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့၏အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ပြီး အရှေ့ တောင်အာရှ ဒေသတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေချိန် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် ဗီယက်နမ်စစ်တွင် ပါဝင် နေပြီး ဆီးတိုးစစ်စာချုပ်အဖွဲ့ကိုိလည်း ဖွဲ့စည်းထား သည်။ ပြည်ပြေးတို့လိုချင်သည်မှာလည်း ပြည်ပ စွက်ဖက်မှုများပင် ဖြစ်နေသည်။ ပြည်တွင်း၌ကား ထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ကရင် သောင်းကျန်းသူ ဗိုလ်မြအုပ်စုနှင့် မွန်သောင်းကျန်းသူ နိုင်ရွှေကျင်အုပ်စုကို အောက်ကျို့စည်းရုံးနေရချိန် ဖြစ်သည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် လန်ဒန် ဒေးလီးမေး(လ်)သတင်းစာ၌ အီယင်ဝပ်က''မြန်မာ နိုင်ငံအာဏာသိမ်းရေးအတွက် သူပုန်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းမိကြပြီ''***(Rebel Bands Unite For Burma Coup) ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ကေအင်န်ယူတပ်ဦးနှင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီတို့ ရန်ကုန်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဖြုတ်ချရန် ပူးပေါင်းသွားကြပြီဟု ရေးသားပြန်သည်။ ရှမ်းနှင့် ကချင်သောင်းကျန်းသူ တုိ့ကလည်း ပူးပေါင်းရန် စဉ်းစားနေကြပြီဟုဆိုသည်။ အစိုးရအတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပြီး သူပုန်တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက် တောတောင်များတွင် လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများ ထူထောင်ထားကြကြောင်း၊ နည်းပြဆရာများ မှာ အမှတ် ၁၃၆ တပ်ဖွဲ့ (FORCE 136)မှဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။****(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံး ပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၇၊ ၈၊ ၉။)
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း၌ပင် စတာ လင်ဆီးဂရေ့(ဖ်)ဆိုသူက အက်တလန်တစ်ရီဗျူး ဂျာနယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အစိုးရသည် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးမြောက်ဘက် မိုင်အနည်းငယ်ခန့်သာ ခိုင်ခိုင်မာမာ အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံရှိ တောတောင်ထူထပ်သောအပိုင်းတွင် ဒေသန္တရပြောက်ကျား တပ်များ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပြည်သူ့စစ်များ အခြေစိုက်နေကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၏ ကြားနေဝါဒသည် ဆိုးရွားသောအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ဦးနုသည် ဗန်ကောက်သို့ ကျွမ်းကျင်စွာထွက်ပြေးလာနိုင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဖြိုချရန် အတိအလင်းကြေညာ ခဲ့ကြောင်း၊ သူပုန်များသည် မြန်မာပြည်တွင်း၌စတင်လေ့ကျင့်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းလုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ချိရေးသားခဲ့သည်။*(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံး ပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၁၅။)
စတာလင်ဆီးဂရေ့(ဖ်)ဆိုသူမှာ အခြားမဟုတ် ပေ။ မြန်မာပြည်တွင် ငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ သတင်း စာဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဂေါ်ဒွန်ဆီး ဂရေ့(ဖ်)(သေဆုံး)၏သားဖြစ်ပြီး အက်ဒွပ်လောရုံ (ဦးလောရုံ)၏ သမီးနှင့်အကြောင်းပါရာမှ သားမက် ဖြစ်လာသူပင်တည်း။ ထို့ကြောင့် ပြည်ပြေးများအတွက် ဝါဒဖြန့်ချိပေးခြင်းမှာ မဆန်းလှပေ။
ဦးလောရုံသည် အီယင်ဝပ်နှင့် စတာလင်ဆီး ဂရေ့(ဖ်)တို့အား ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ပထမပတ် နှင့် ဒုတိယပတ်တွင် ကေအင်န်ယူတပ်ဦးဌာနချုပ်သို့ ပို့ပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကေအင်န်ယူတပ်ဦးဌာနချုပ် မှာ သောင်ရင်းမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းဘိနတွင် တည်ရှိ သည်။ ဦးလောရုံသည် သားသမက်ဖြစ်သူ ဆီးဂရေ့(ဖ်) နှင့် သြစတြေးလျသတင်းထောက် အီယင်ဝပ်တို့ကို လုပ်ကြံ၍ ဝါဒဖြန့်ချိစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဦးနု နှင့် ဦးလောရုံသည် ပြည်ချစ်လူငယ်တပ်ပေါင်းစုကို အရေးပေါ်ဖန်တီးပြီး ပြည်ချစ်လူငယ်တပ်ပေါင်းစု အသံလွှင့်ဌာနကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသားအရင်းရှင် ကြီးများ၏အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ကြပြန်သည်။
ထို့နောက် ဂျပန်မှ အသံလွှင့်စက် သုံးလုံး မှာကြားပြီး ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၅ဝ မိနစ်မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူခိုထိုင်**(Sukho Thai) (သောက္ကတဲ)မြို့တွင် အခြေချကာ အသံလွှင့်ကြတော့ သည်။***(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၁။)ပြည်ချစ်လူငယ်တပ်ပေါင်းစု အသံလွှင့်ဌာန အတွက် အသံလွှင့်နိုင်ရေးနှင့် နေရာထိုင်ခင်း အဆောက်အအုံတို့ကို စီစဉ်ပေးသူမှာ ဆူခိုထိုင်မှ တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်အမတ် ဆစ်ရွှေသမ် စွန်လောင်နှင့် ထိုင်းစီအိုင်ဒီမှ ပုလိပ်အရာရှိကြီးများ ဖြစ်သည်။ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်တွင် အသံလွှင့် အစီအစဉ်ကို သုံးပတ်မျှရပ်နားပြီး မဲဆောက် မှတစ်ဆင့် သြဂုတ်လကုန်တွင် ဘိနစခန်းသို့ ရွှေ့ပြောင်း ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် မှစ၍ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးများကို အသံလွှင့်၍ လှုံ့ဆော်ကြပြန်သည်။ သို့သော် တပ်မတော် အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ ပတ္တမြားစစ်ဆင် ရေးကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင် အသံလွှင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားရတော့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၌သာ စက်စမ်းရင်း အသံလွှင့်ကြသေးသော်လည်း ကျယ်ပြန့်သော အသံလွှင့်ဝါဒဖြန့်ချိခြင်းအဖြစ်သို့ ရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပေ။****(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၂ ၊ ၂၃။)
ပြည်ပြေးအသံလွှင့်ဌာနသည် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအင်န်ယူ)နှင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီတို့ သုံးပါတီပူးပေါင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေးတပ် ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေးအတွက် လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီးကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
နောက်တစ်နေ့ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် သုံးပါတီ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အသံလွှင့် ကြေညာပြန်သည်-*****(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံး ပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၂၈၊ ၂၉။)
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နှင့် ကေအင်န်ယူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး များ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်
(၁) မဟာဗမာဝါဒီ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း ငါ့မင်းငါ့ချင်း အစိုးရဖြုတ်ချရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ ပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်သော၊ တန်းတူသော၊ ဒီမိုကရေစီကျသော၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာသော ပြည်နယ်ပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးနှင့် တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းရာတွင် တန်းတူသော၊ ဒီမိုကရေစီကျသော၊ အပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုသော၊ တပ်ပေါင်းစုမှ နုတ်ထွက်လိုက နုတ်ထွက်နိုင်ခွင့်ရှိသော၊ အပြန်အလှန်အကြံပေးမှုများရှိသော စည်းရုံးမှုများကို အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ပအိုဝ့်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင် အစရှိသော တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်၍ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသော ''တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု''ကို ဖွဲ့စည်းရန်။
(၂) တပ်ပေါင်းစုသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ ပြည်သူများကို စည်းရုံး၍ ရှေ့ဆောင်ကာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို အဓိကထား၍ ဗိုလ်နေဝင်း အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သွားရန်-
(က) လူမျိုးတစ်မျိုး၏အရည်အချင်းရှိသော မည်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဆို လူဦးရေ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ၊ တရား မျှတသော အကျယ်အဝန်းရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အာဏာ အပြည့်အဝ ရှိသော ပြည်နယ်များဖွဲ့စည်းပေးရန်။
(ခ) တန်းတူရေးအခြေခံပေါ်တွင် ပြည်နယ် ပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံ တည် ဆောက်ရန်နှင့် ပြဿနာရပ်များကို အကြမ်း မဖက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းသွားရန်။
(၃) အဖွဲ့သုံးဖွဲ့သည် မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်တည်းဟူသော ပြည်နယ်သစ် သုံးပြည်နယ် ကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် သဘောတူကြသည်။
ဤကား ပြည်ပြေးတို့၏ဝါဒဖြန့်ချိချက်များပင် ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကား များစွာကွာ ခြားနေကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပေသည်။
ဦးနုနှင့် ပြည်ပြေးများ၏ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ အမှတ် ၃၂ ဆွိုင် ၁၈ စုခုမ်းဗစ်တ်လမ်း(ှဥှုယ၁၈ျကု့ကာလငအ) တွင် ဌာနချုပ်ဖွင့်လှစ်၍ အထင်အရှားအခြေစိုက်လျက်ရှိ သည်။ မန်းဘဇံက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော ကေအင်န်ယူတပ်ဦးသည် ဘိနစခန်းတွင် ဌာနချုပ်ဖွင့် လှစ်ထားသည်။ နိုင်ရွှေကျင်၏ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှာ လူအင်အားမဆိုစလောက်နှင့်သာ လှုပ်ရှားနေရသည်။ ပြည်ပြေးများသည် တစ်ဖက်မှ နိုင်ငံတကာထောက်ခံ မှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရင်း ကရင်နှင့် မွန်သောင်းကျန်း သူများ၏ အားပေးကူညီမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်တွင်ကား ဆွိုင် ၁၈ ဌာနချုပ်တွင် သုံးပါတီ အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပနိုင်ကြတော့သည်။ အစည်းအဝေးမှာ မေလ ၂၅ ရက်အထိ ၁ဝ ရက် တိုင်တိုင်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ *(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၂၉။) ဦးနုတို့လူစုသည် ယိုးဒယား ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မာရှယ်ဆွန်ဂရမ်၏ ဇနီးတစ်ဦးက ပေးထားသော အဆောက်အအုံတွင်နေထိုင်လျက် ရှိကြ သည်။ ဦးလောရုံသည် သုံးပါတီအစည်းအဝေးသတင်း အား ဟောင်ကောင်နှင့် ဗန်ကောက်မှသတင်းထောက် များကို ခေါ်ယူ၍ တခမ်းတနားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစေခဲ့ သည်။
သုံးပါတီခေါင်းဆောင်များသည် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စည်းရုံးရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများကို မေလ ၂၅ ရက် တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြသည်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုလည်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။ တပ်ပေါင်းစုနာယကမှာ ဦးနု ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌမှာမန်းဘဇံဖြစ်သည်။ နိုင်ရွှေကျင်(ခေါ်) နိုင်ဘလွင်သည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးနှင့်စည်းရုံးရေးဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး မှာ ဗိုလ်လက်ျာဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မြက စစ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးမှာ တီကလစ်ဖြစ် သည်။* (မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၃ဝ။)
ပြည်ပြေးခေါင်းဆောင်များ၊ ကေအင်န်ယူတပ်ဦး ခေါင်းဆောင်များနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင် များသည် သုံးပါတီအစည်းအဝေးတွင် ညီညွတ်ရေးရကြပြီး ပူးပေါင်းကြပါပြီဟုဆိုကာ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသော်လည်း စင်စစ်တွင်ကား ခိုင်မာသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မဟုတ်ပေ။ ပြည်ပြေးများမှာ နိုင်ငံတကာတွင် ထင်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ဟိတ်ဟန်ကြီးမားနေသော်လည်း လူသူလက်နက် အင်အား၊ စည်းရုံးရေးအင်အား မည်မည်ရရမရှိလှပေ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှာလည်း လူအင်အား အနည်းငယ် သာရှိပြီး ဗိုလ်မြအုပ်စုနှင့် အစေးမကပ်ခြင်းကြောင့် အခြေအနေအရကြည့်၍ ဆက်ဆံနေရသည်။ ဗိုလ်မြ အုပ်စုမှာလည်း အခြားသောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညီညွတ်ရန်မဆိုထားနှင့် ကရင်သောင်းကျန်းသူ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပင် ပဋိပက္ခပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
စင်စစ်သောင်းကျန်းသူ သုံးဖွဲ့စလုံးမှာ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသော ကြောင့် မိမိတို့အတွက် အသက်ရှူ ချောင်လိုချောင်ငြား၊ အခွင့်အရေး ရလိုရငြား ပူးပေါင်းကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပြည်ပြေးအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ရာတွင် ကရင်နှင့်မွန်သောင်းကျန်းသူတို့၏ နယ်မြေများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်နေသကဲ့သို့ ကရင် နှင့်မွန်သောင်းကျန်းသူများမှာလည်း နိုင်ငံတကာတွင် ဝင်ဆံ့နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ပြေးအဖွဲ့ကို ခုတုံးလုပ်ရမည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ရောက်ရှိနေပေသည်။ သို့သော် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းကား မရှိကြပေ။ ဦးနုသည် ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးအပါအဝင် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးနှင့် မွန်ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို မန်းဘဇံနှင့် နိုင်ရွှေကျင်တို့ အကြိုက်လိုက်လျောသဘောတူခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကရင်ပြည်နယ်တိုးချဲ့ဖော်ထုတ်ရေးနှင့် ခွဲထွက်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းရေးတို့တွင်မူ အငြင်းပွားနေကြသည်။ ကေအင်န်ယူတပ်ဦးက သုံးပါတီတပ်ပေါင်းစုကို မသန့်ရှင်းသော မသူတော်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှု (UNHOLY ALLIANCE)ဟုသာ မြင်ထားသည်။(မြရာပင်စာပေ၏နောက်ဆုံးပေါ်သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၄၁၊ ၄၂။)
စင်စစ် သုံးပါတီညီညွတ်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်ပါတီချင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းအတွင်း၌ ကမောက်ကမ မညီမညွတ်ဖြစ်နေကြသည့်အပြင် နိုင်ငံခြားသူလျှိုများ ပါ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသဖြင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီနေသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟုသာ ဆိုရပေမည်။
နိုင်ငံခြားသူလျှိုများ၊ သို့မဟုတ် ပြည်ပစွက်ဖက်မှု
ပြည်ပြေးလှုပ်ရှားမှုသည် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် အခြားသောသောင်းကျန်းမှုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများထက်ပင် နေ့ချင်းညချင်း ထင်ပေါ်ကျော် ကြားခဲ့သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် နိုင်ငံခြား စွက်ဖက်မှုများ၊ ပြည်ပ ပယောဂများလည်း ပါဝင်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရသည်။ ပြည်ပြေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် ပင် နိုင်ငံခြားသူလျှိုများ ပါဝင်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပြည်ပြေးလှုပ်ရှားမှုကို အစီအစဉ်တကျကြိုးကိုင်နေ သူမှာ နေးရှင်းသတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်း ဦးလောရုံဖြစ်သည်။ ဦးလောရုံသည် ပြည်တွင်းမှ ထွက် ပြေးသွားကြသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ကို စနစ်တကျစုစည်း၍ ဦးနုကို စည်းရုံးကာခေါင်း ဆောင်တင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဦးလောရုံသည် အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(စီအိုင်အေ)အတွက် အလုပ် လုပ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။
ဦးလောရုံအား အဘ စီအက်စ်တုန် အမိ မြစ်ကြီး နားသူ ရှမ်းအနွယ်ဝင် ဒေါ်စောရွှေတို့မှ ၁၉၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် ကာမိုင်း မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က မန္တလေးမြို့စိန်ပီတာ ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် မှစ၍ မြန်မာပြည်မီးရထားဌာနတွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှစစ်တပ်၌ အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းသည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင်ကား အမေရိကန် တပ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး လျှိုဝှက်ထောက်လှမ်းရေး မဟာဗျူဟာအဖွဲ့(အိုအက်စ်အက်စ်)*** (OFFICE OF THE STRATEGIC SERVICES) တွင် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြင့် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ၄၇ခုနှစ်တွင် ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ပို့ဆောင်ရေး အရာရှိချုပ်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်တွင် နေးရှင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေသူ နှင့် အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသစ်သတင်းစာကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဆန်စပါးစုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး သတင်းစာနှင့် အနုစာပေ ဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ မက်ဆေးဆေးဆုကို ရရှိခဲ့ သည်။ သတင်းစာလောကတွင် များစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သြဇာတိက္ကမ ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။၁(၁။ချစ်ကြည်ရေးကြည်ညွန့်၏ ဦးနု၊ ဦးလောရုံအပေါင်း အပါများနှင့် နယ်ချဲ့ဂိုဏ်း စာမျက်နှာ ၁၃၃ မှ ၁၃၆)
အမေရိကန်၏ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး မဟာဗျူ ဟာဌာန(အိုအက်စ်အက်စ်)သည် စီအိုင်အေအဖွဲ့ကြီး၏ အခြေခံပင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်တို့၏ လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှာ သတင်း ထောက်လှမ်းရေး ညံ့ဖျင်း၍ဟုယူဆပြီးထိုစဉ်က အမေရိကန်သမ္မတရုစဘဲ့က အိုအက်စ်အက်စ်ကို ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်မူ သမ္မတ ထရူးမင်းက အိုအက်စ်အက်စ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ ဥပဒေနှင့် တစ်ဆက်တည်း စီအိုင်အေ အဖွဲ့ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စီအိုင်အေသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် တရားဝင်ပေါ်ပေါက် လာသည်။ စီအိုင်အေအဖွဲ့ကြီးသည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေးကို အဓိက ဦးတည်ချက်ထားပြီး နိုင်ငံ တကာနိုင်ငံရေးလောကတွင် ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာရာ ကမ္ဘာတွင် လူသိများ၍လာသည်။
ဦးလောရုံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်တွင် နေးရှင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတိုက်ကို ထူထောင်ပြီး အယ်ဒီတာချုပ်အရေခြုံ၍ သူလျှိုလုပ်ငန်း ကို စတင်တော့သည်။၂ ဦးလောရုံသည် စစ်မှုထမ်းအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သော အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများ အပေါ်တွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကျိုးပြုလာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ခါစနိုင်ငံတော်အား အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံ များက နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအကူအညီများ ဗန်းပြ၍ လည်းကောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်၍လည်းကောင်း သြဇာ လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးစားနေကြချိန်တွင် ဦးလောရုံကလည်း တိုးတက်သောသတင်းစာဆရာများအား ဖယ်ရှားပစ် နိုင်ရန် အာရှဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဖို့ဒ်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့၏ အကူအညီဖြင့် သတင်းစာကလပ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းသေးသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာ ဆရာအသင်းနှင့် မြန်မာပြည်သတင်းထောက်အသင်း တို့က ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ခဲ့သဖြင့် မအောင်မြင် ခဲ့ပေ။၃
တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်လာသောအချိန်တွင် ဦးလောရုံသည် နေးရှင်းသတင်းစာနှင့် နိုင်ငံသစ်သတင်း စာများမှ စောင်းမြောင်းပုတ်ခတ်တော့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရက ဦးလောရုံအား ထိန်းသိမ်းပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ ဦးလောရုံသည် ထိုနှစ်ကုန်တွင် အေဒီလမ်းရှိ အမှတ် ၁၄ (အေ) နေအိမ်အား ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးသို့ ရောင်းချ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။၄
ဦးလောရုံသည် အေဒီလမ်း၌နေထိုင်ခဲ့စဉ် တစ်လျှောက်လုံး အိမ်နီးနားချင်းများဖြစ်သူ မစ္စတာ ဂျေအက်စ် ဖာနီဗယ်(ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရသူ)၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာလုစ်တို့နှင့် တောက်လျှောက်အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်မှစွန့်လွှတ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူမည် ဟုဆိုကာ ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသောအခါ ဗိုလ်ရန်နိုင်တို့ ကဲ့သို့သော ပြည်ပြေးအချို့မှာကြိုတင်ရောက်ရှိနေကြ ပြီး ဖြစ်သည်။၅ ဦးလောရုံသည် ပြည်ပြေးအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် အဓိကကြိုးပမ်းသူပင် ဖြစ် သည်။
ဦးလောရုံသည် ပြည်ပြေးများအား စုစည်း၍ တော်လှန်ရေးအစိုးရအား ဖြုတ်ချနိုင်ရန်အတွက် ဦးနု အား ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဦးနုသည် နိုင်ငံရေးသြဇာကြီးမားသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁ဝ နှစ်ခန့် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခေါင်းဆောင်လုပ်လာသူဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအရ စည်းရုံးခဲ့သောကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု၏ ထောက်ခံမှု ရရှိနိုင်သည်။ ဦးနုအား ၁၉ဝ၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်တွင် မြောင်းမြခရိုင်၊ ဝါးခယ်မမြို့၌ အဖ ဦးစံထွန်း၊ အမိ ဒေါ်စောခင်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန် မြို့မ ကျောင်းမှ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ရောက် သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် ဘီအေအောင်ပြီး ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ဘီအယ်လ်အောင်သည်။ ၁၉၃၅-၃၆ ခုနှစ် တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားသပိတ် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက ဦးနုအား ထောင်နှစ်နှစ် ချထားရာ ဂျပန်တပ်များဝင်လာမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ်တွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးများဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကျဆုံးချိန်တွင် နု- အက်တလီစာချုပ်ချုပ် ဆိုသည်အထိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏နေရာကို ဝင်ခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေးရသောအခါ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး ဖဆပလဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် သန့်ရှင်းဖဆပလ ကိုထူထောင်ပြီး ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ပါတီဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။၁(၁။ ချစ်ကြည်ရေး ကြည်ညွန့်၏ ဦးနု၊ ဦးလောရုံ အပေါင်းအပါများနှင့် နယ်ချဲ့ဂိုဏ်း၊ စာမျက်နှာ ၁၂၃ မှ ၁၂၅။)
ဦးနုသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်တွင် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၄ ရက်တွင် ဦးဓမ္မဓဇဘွဲ့အမည်ဖြင့် ရဟန်းဝတ်သည်။ တရားဟောသည်။ အလှူခံ ထွက်သည်။ ရခိုင်လေဘေးကိုအကြောင်းပြ၍ နေရာ အနှံ့အပြားလှည့်လည် တရားဟောခဲ့သည်။ ဘာသာ ရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်ပါတော့မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ကြေညာသည်။ သို့သော် ဦးလောရုံက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ခေါ်ယူသွားသောအခါတွင် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပါသွားတော့၏။
ပြည်ပြေးအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်စကြာလည်း ပါဝင်သည်။ ဗိုလ်စကြာသည် ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် အဘ ဦးမြသာ၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင်တို့မှ ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အစိုးရဆေးကျောင်းတက်ရာမှ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် နှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗမာ့ကာကွယ် ရေးတပ်မတော် ဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ်မှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယစစ်ဝန်ကြီးဖြစ်လာသည် ၁၉၄၃ -၄၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံမှူးဖြစ်ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် တွင် ပါလီမန်အတွင်းဝန်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် တွင် ပါလီမန်အမတ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး ဗမာ့လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး AIR BURMA နှင့် သီရိစကြာကုမ္ပဏီ ထူထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသား ဂရေဂရီပက်နှင့်တွဲ၍ ခရမ်းရောင်လွင်ပြင်ရုပ်ရှင် ကားတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်း နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
စောကြာဒိုးသည်လည်း တပ်မတော်တွင် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာရှိသူ ကရင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ညောင်ရွှေမဟာဒေဝီ စဝ်ဟိန်ခမ်းသည် လည်း သိန္နီမြောက်ပိုင်း စော်ဘွား ကြီး၏သမီး၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတကြီး စဝ်ရွှေသိုက်(ကွယ်လွန်)၏ ဇနီးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသမီးအမတ် ဖြစ်ခဲ့သူပင်ဖြစ်သည်။ တီကလစ်သည် လည်း ၁၉၆၃ ခုနှစ်အထိ တပ်မတော်တွင် လေတပ်ဦးစီးချုပ် (ဗိုလ်မှူးချုပ်)အဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသူပင်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ရန်နိုင်သည်လည်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာဘမော်၏သမီး သဉ္ဇာမော်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်လက်ျာသည် လည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသူ ပင်ဖြစ်သည်။ ဦးသွင်နှင့်ဦးဝင်းတို့သည်လည်း ဝန်ကြီး ဟောင်းများပင်ဖြစ်သည်။၂ ထို့ကြောင့် ပြည်ပြေးခေါင်း ဆောင်များမှာ နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာရှိသူ၊ သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသူများပင် ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကိုယူ၍ တော်လှန်ရေးအစိုးရအား ဖြုတ်ချပါက ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုရလိမ့်မည်၊ လွယ်ကူစွာအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံခြားသူလျှိုများ က ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပုံရသည်။သို့သော် ပြည်ပြေးခေါင်းဆောင်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျက်မှောက်နိုင်ငံ ရေးသမိုင်းတစ်လျှောက် အတွင်း ဂိုဏ်းဂဏစွဲ၊ ဝါဒစွဲဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြဖူးသူများ ဖြစ်သည်ကို မူကား ဦးလောရုံ၏ဆရာများ သတိပြုမိကြဟန် မတူခဲ့ ပေ။
ပြည်ပြေးအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာရှိသူ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ဖြစ်နေ သကဲ့သို့ ပြည်ပြေးအဖွဲ့၏ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်နေသူ များမှာလည်း နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ သူလျှိုများ ပင်ဖြစ်သည်။ ဖဆပလအစိုးရ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဦးကျော်ငြိမ်း၏ အပါးတော်မြဲဖြစ်ခဲ့သူ သုဝေသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးပြီး ဗိုလ်ရန်နိုင် အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ပြည်ပြေးလှုပ်ရှားမှု ထင်ရှားလာချိန်တွင် သုဝေသည် ဗန်ကောက် ဝေါလ်ဒ်*BANGKOK WORLD သတင်းစာတိုက်တွင် အလုပ်လုပ်ရင်း နိုင်ငံခြားသူလျှိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အထောက်တော် ဖြစ်နေလေပြီ။၁(၁။ မြရာပင်စာပေ၏ နောက်ဆုံးပေါ် သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၄၆။) ဘီဘီစီ**BRITISH BROADCASTING CORPORATION ထွေးမြင့်သည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးတွင် ရုံးအုပ် အဖြစ် အမှုထမ်းနေရာမှ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် လန်ဒန်သို့ တိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးပြီး ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာနတွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။၂ ထို့နောက် နိုင်ငံခြားလျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အထောက် တော်အဖြစ် ပြည်ပြေးအဖွဲ့ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ မြဝတီမဂ္ဂဇင်းလက်ထောက်စာတည်းဟောင်း ရဲခေါင် ***(စာရေးဆရာမြဝတီရဲခေါင်) သည်လည်း အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ပြည်ပကိုထွက်ပြေးသွားရသူဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ပထမဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းခေါင်းဆောင်သော ၁၁ ဦး ပြည်ပသို့ထွက်ပြေး ခဲ့ရာ ဦးဝင်း၏သား တင်မောင်ဝင်းနှင့် ချွေးမ ဘေဘီ တို့လည်း ပါသွားကြသည်။၃ သုဝေ၊ ထွေးမြင့်၊ ရဲခေါင် နှင့် တင်မောင်ဝင်းတို့သည် ဦးလောရုံ၏အစီအစဉ် အရ အသံလွှင့်၍ ဝါဒဖြန့်ချိကြရသူများဖြစ်သည်။
ပြည်ပြေးအဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှုတွင် အဓိကကြိုးကိုင်သူ မှာ စီအိုင်အေ သူလျှိုကိုယ်စားလှယ် ဦးလောရုံဖြစ် ကြောင်း၊ ပြည်ပြေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် အရေးပါသော နေရာများတွင် သူလျှိုများဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေကြောင်း၊ ဦးနုနှင့် ပြည်ပြေးခေါင်းဆောင်များသည် နိုင်ငံခြား အရင်းရှင်ကြီးများထံမှ အကူအညီရသည်သာမကဘဲ အမေရိကန်ဦးဆောင်သော ဆီးတိုးစစ်အုပ်စုထံမှ အကူ အညီများရရှိနေကြောင်းများနှင့် ထိုင်းအစိုးရက ငြင်း ဆန်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားအချို့နှင့် ပုလိပ်အာဏာပိုင်အချို့က ပြည်ပြေးများအား လိုအပ် သည်များကူညီနေကြောင်းတို့မှာ ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှား သည်ထက် ထင်ရှားလာသည်။ ပြည်ပြေးများအား ဦးလောရုံ၏သားမက်ဖြစ်သူ စတာလင်ဆီးဂရေ့ဖ်(နမ်း ခမ်းဆေးရုံအုပ်ကြီးဂေါ်ဒွန်ဆီးဂရေ့ဖ်၏သား အမေရိ ကန်လူမျိုး)က သတင်းဆောင်းပါးများဖြင့် ကြော်ငြာ ပေးရုံသာမကဘဲ ဆီးကရေ့ဖ်၏ဇနီး (ဦးလောရုံ၏သမီး) ဝင်ဒီဆီးဂရေ့ဖ်ကလည်း ဝင်းလင်းရောင်အမည်ဖြင့် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ထုတ် ဗန်ကောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ''မေ့ပျောက်နေသော ဒိုမီနို ဖဲချပ်ဗမာပြည်'' (Burma; The Forgotten Domino) ဆောင်းပါးကိုရေးသား၍ ပြည်ပြေးများအား သိဒ္ဓိတင်ခဲ့ပြန်သည်။
ဝင်ဒီဆီးဂရေ့ဖ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအား တရုတ် ကွန်မြူနစ်များက ကျူးကျော်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လိမ်ညာ သတင်းလွှင့်၍ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စုများက ပြည်ပြေးတို့အား ကူညီလာစေရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တရုတ်တပ်များက သိမ်းပိုက်ထားသယောင်ယောင်ပင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ကြံရေးသားခဲ့သည်။၁
''ကမ္ဘာက တောင်ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင့် ကမ္ဘော ဒီးယားတို့အား အာရုံပြုနေကြလင့်ကစား ဗမာ ပြည်တွင်းစစ်ရေးဖြစ်ပေါ်မှုများ မဖုံးကွယ်နိုင်လောက် အောင်ဆိုးရွား၍နေပေသည်။ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ လာအိုနှင့် ယိုးဒယားအစိုးရအာဏာပိုင်အသီးသီး ကလည်း သတိရှိစွာဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ယခင်လများအတွင်းက ဗမာပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသများကို တိတ်တဆိတ်စိုးမိုးထားရာတွင် တိဗက်၊ ကိုရီးယားအရေးပြီးသည့် နောက်တွင် တရုတ်နီတပ်များ အများအပြားကို အသုံးပြုခြင်းမှာ ပထမအကြိမ်ဟု ဆိုရပေမည်။''
ပြည်ပြေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဗန်ကောက်ဝေါလ်ဒ် သတင်းစာ အယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်သူ အမျိုးသားသစ္စာ ဖောက် မရန်ဂျာလာလည်း ပါဝင်သည်။ မရန်ဂျာလာ သည် ဟူးကောင်းတောင်ကြား တိန်ကောက်ရွာ ဒူဝါ စွန်ဖုန်း၏သား ကချင်အမျိုးသားဖြစ်သည်။ နေးရှင်း သတင်းစာတွင် ဦးလောရုံ၏ လက်ထောက်အယ်ဒီတာ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လက်ထောက် အရာရှိအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရာမှ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းသို့ ထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်သည်။ ထိုင်းတွင် တီကလစ် ၏ တွန်မီတိုးရစ်အေဂျင်စီ (Tommie tourist agency)၌ လုပ်ကိုင်နေစဉ် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၌ ကေအိုင်အေသောင်းကျန်း သူများအတွက် လက်နက်များကို ဗန်ကောက်မြို့ ဒုံးမွန်း လေဆိပ်မှ မြို့တွင်းသို့သယ်ဆောင်လာစဉ်ထိုင်း ရဲဘက်မှ ဖမ်းဆီးမိပြီး ထောင်နှစ်နှစ်ကျခဲ့ရသည်။ ထောင်မှလွတ်လာသောအခါ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဗန်ကောက်ဝေါလ်ဒ် (Bangkok World) သတင်းစာတွင် ဝင်လုပ်သည်။ ဦးလောရုံ၏တပည့် လက်ရင်း သူလျှိုတစ်ဦးပင် ဖြစ်သည်။၂(၂။ မြရာပင်စာပေ၏ နောက်ဆုံးပေါ် သုံးပါတီ၊ စာမျက်နှာ ၆၆၊ ၆၇။)
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက်တွင် ဟောင်ကောင်မြို့ထုတ် ဖားအီစတန်အီကောနောမစ်ရီ ဗျူးဂျာနယ်တွင် ဒါရက်ဒေးဗိစ် (fDerek Davies) ဆိုသူက ''မြန်မာနိုင်ငံချိန်ခွင်လျှာ အလေးသာစေပြီ'' (Burma; Tilting The Scales) ဆောင်းပါးနှင့် ဂျိမ်းစ် ဒေါ်လတန်(Jame Dalton)ဆိုသူက တောတွင်းက သူငယ်နပ်စားများ (Babies In The Wood) ဆောင်းပါးများရေး၍ ပြည်ပြေးများကို ကြော်ငြာပေး ကြပြန်သည်။၃ ယင်းဆောင်းပါးများမှာ ဦးလောရုံ၏ အစီအစဉ်ပင်ဖြစ်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နီကျူးကျော်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ တော်လှန်ရေးအစိုးရ အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ ကြောင်းဖော်ပြပြီး ဦးနု၏ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပြန်လည် အသက်သွင်းရေးကိုသာ အမွှမ်းတင်ထားကြသည်။ စင်စစ်အရှေ့ဖျားစီးပွားရေး ဂျာနယ်သည် စီအိုင်အေနှင့် အရင်းရှင်ကြီးများ၏ ကျောထောက်နောက်ခံဂျာနယ် တစ်ခုသာဖြစ်သည်။၄
ဦးနုအား တောက်လျှောက် အကူအညီပေးနေ သော နိုင်ငံခြားသားများတွင် တစ်ချိန်က ပြည်တော်သာ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော ကေတီအေ (Knappen Tippets Abbet Engineering Company) တွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ ရောဘတ်အာရ်နာသန် အဆိုစ် ယိတ်စ် အင်ကော်ပိုရေတက်(Robert R.Nathan Associates Inc)မှ ရောဘတ်နာသန်(Robert Nathan)နှင့် ဦးနု၏ ပြည်တော်သာစီမံကိန်း စီးပွားရေး အရာရှိဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ လူးဝစ်ဂျေဝေါ်လင်စကီး (LouisJ.Wallinsky)တို့လည်း အဓိကပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က ဦးနုလန်ဒန်မှ နယူးယောက်သို့ ရောက်ရှိလာစဉ်တွင် ရောဘတ်နာသန်နှင့် ဝေါ်လင် စကီးတို့သည် ဦးနုအား လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည်။ ထို့နောက် ဦးနုအား အမေရိကန်မှ လိုအပ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဦးနုသည် ဝေါ်လင် စကီး၏စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တွင် ဦးနုလိုလားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၊ မြန်မာများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင်လည်း အမေရိကန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခွင့်ရခဲ့သည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလတွင် ရောဘတ်နာသန် သည် ဗန်ကောက်သို့ရောက်ရှိလာပြီး ဦးနုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။ ရောဘတ်နာသန်သည် အမေရိကန်သို့ ပြန်သွား ပြီးနောက် ဝေါ်လင်စကီး ဗန်ကောက်သို့ရောက်ရှိ လာကာ ဦးနုအတွက် လတ်တလောရပ်တည်ရေး လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာများကိုပါ အကြံပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြန်သည်။၁ ပြည်ပြေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးမှာသူလျှိုများ၊ ပြည်ပစွက်ဖက်မှုများဖြင့်သာ ရောပြွမ်း၍နေခဲ့သည်။ အာဏာရူးသူများက မည်သူ့ထံမှ အကူအညီကိုမဆို ယူပါမည်ဟု မျက်နှာပြောင်တိုက်၍ ကြေညာသည်နှင့် ပြည်ပစွက်ဖက်မှုများမှာ အလုအယက်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ စီးပွားရေးသမားများကလည်း ကွန်မြူနစ် အန္တရာယ်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ နိုင်ငံကြီးများပါဝင်လာရန် လက်ယပ်ခေါ်ကြသည်။သို့သော် ပြည်ပြေးများ ကိုယ်တိုင်မှာမူကား ဟိတ်ဟန်ကြီးမား သယောင်ရှိ သော်လည်း ထိရောက်သော နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ ပြုလုပ်နိုင်ကြစွမ်း မရှိ သေးပေ။
ဦးနုတို့လူစုသည် တော်လှန်ရေးအစိုးရအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာ ပြန်လည်ရယူရေးကို ကြိုးပမ်းကြရာတွင် အဓိက အားဖြင့် ပြည်ပအရင်းရှင်နိုင်ငံများကို အားကိုးကြ သည်။ ထိုစဉ်က အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံကြီး များသည် တရုတ်နီ၊ မြောက်ဗီယက်နမ်၊ လော၊ ကမ္ဘောဒီးယား (ယခု ကမ်ပူးချား)နိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် ကွန်မြူနစ်များ အရှေ့တောင်အာရှဒေသကို လွှမ်းမိုးသွားမည့် အန္တရာယ်ကို များစွာစိုးရိမ်နေကြသည်။ အမေရိကန် သည် ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့သော မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ကျဆုံး သွားမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဆီးတိုးစစ်စာချုပ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရသည်။ ဗီယက်နမ်၊ လောနှင့် ကမ္ဘော ဒီးယားဟူသော အင်ဒိုချိုင်းနားဒေသတွင် အမေရိကန် စစ်တပ်သည် ကွန်မြူနစ်များနှင့် တိုက်ခိုက်နေရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်တပ်များ ချထားရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ပြည်ပြေးများသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ် အန္တရာယ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနောက်အုပ်စု အကြိုက် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်အသက် သွင်းရေးကို ဗန်းပြခြင်းတို့ဖြင့် ပြည်ပစွက်ဖက်မှုများ ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးအစိုးရ သည် နိုင်ငံအား မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့သဖြင့် တစ်ပြည်လုံးဆူပူနေကြောင်း၊ တရုတ်တပ်များကို ကာကွယ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်လည်း အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြရသည်။
ပြည်ပြေးများသည် လက်နက်နှင့်ငွေကြေးရရှိရေး အတွက် ပြင်ပကို အဓိကအားကိုးခဲ့ကြသကဲ့သို့ ပြည်တွင်း လူအင်အားနှင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် ပဏာမအား ဖြင့် ကရင်သောင်းကျန်းသူများကို အားကိုးခဲ့ကြသည်။ အီယင်ဝပ်နှင့် ဆာဒေါ်မန်စမစ်တို့ကလည်း ကရင် သောင်းကျန်းသူများသည် အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ် ကြောင်းဖြင့် အမွှမ်းတင်ပေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ပြည်ပြေးများအားကိုးသည့် ကရင်သောင်းကျန်းသူများ မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်များအတွင်းကကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ကြီးများကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သော အင်အားစုများ မဟုတ်ကြတော့ပေ။ ကရင်သောင်းကျန်း သူများသည် အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ပြိုကွဲနေကြပြီဖြစ်သည်။ စောဟန်တာသာမွှေး၏ ကေအာရ်စီသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီချက်အရ အလင်းဝင်သွားပြီဖြစ်သည်။ ကေအင်န်ယူ ပါတီသည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလက်ခံပြီး ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်းနေပြီဖြစ်သည်။ မန်းဘဇံ၏ကေအင်န်ယူ တပ်ဦးသာလျှင် ပြည်ပြေးအဖွဲ့နှင့် လတ်တလော ပူးပေါင်းမိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်သောင်းကျန်းသူများအတွင်း ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ဝင်ရောက်လာသည်မှ အစပြု၍ အုပ်စုများကွဲခဲ့ ကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ပြီးလေပြီ။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် ကေအင်န် ယူပါတီ ပထမအကြိမ် ပါတီညီလာခံအပြီးတွင် ကရင် သောင်းကျန်းသူများသည် ကေအင်န်ယူပါတီ၊ ကေအာရ်စီ၊ ကေအင်န်ယူနှင့် ကေပီအယ်လ်အေ ဟူ၍ အုပ်စုကြီးလေးခုအထိပင် ကွဲပြားသွားခဲ့ရပြီး လက်ဝဲလက်ယာပဋိပက္ခသည်လည်း အတိအလင်းပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စောဟန်တာသာမွှေး၏ ကေအာရ်စီ အလင်းဝင်ပြီး နောက် ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်တွင် ဗိုလ်မြအုပ်စုသည် ကေအင်န်ယူပါတီ၏ ဦးဆောင်မှု အောက်မှခွဲထွက်သွားပြန်သည်။ ထို့နောက်ကရင်သောင်းကျန်းသူများတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်းသော ကျော်မြသန်း အုပ်စု (ကေအင်န်ယူပီ)နှင့် ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးဝါဒီ ဗိုလ်မြအုပ်စု (ကေအင်န်အယ်လ်စီ)ဟူ၍ အဓိကအားဖြင့် ကွဲပြားလာ သည်။ ကွန်မြူနစ်များနှင့် လုံးဝပူးပေါင်းခြင်းထက် မဟာမိတ်အဖြစ်သာ ဆက်ဆံလိုသော မန်းဘဇံသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ဝ ရက်တွင် ကေအင်န်ယူပီမှခွဲထွက်ပြီး ဗိုလ်မြအုပ်စုနှင့် သွားရောက် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ကရင်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုကြီး နှစ်ရပ်သည် ပြန်လည်ညီညွတ်ကြရန် စေ့စပ်ဆွေးနွေး ကြရင်းမှ ရွှေကျင်၊ ကျောက်ကြီးနယ်မြေများတွင် နယ်မြေလုကြရင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာသည်။ မန်းဘဇံနှင့် ဗိုလ်မြကလည်း ပဲခူးရိုးမတွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်အတူ အခြေချနေသော ကေအင်န် ယူပါတီ ဗဟိုနှင့် စင်ပြိုင် ကေအင်န်ယူကြားဖြတ်ဗဟို ကို ထူထောင်ထားခဲ့ကြသည်။
ကေအင်န်ယူကြားဖြတ်ဗဟိုသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သဘောတူညီချက်များ ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်း၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းတို့ကို တင်ပြခဲ့ပြီးပေပြီ။၁(၁။အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် အမှတ် (၄၄)ခြေမြန်တပ်မဌာန ချုပ်တို့မှပြုစုသော သောင်းကျန်းသူသမိုင်းစာ အုပ်များ၊ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူ သမိုင်းစာစောင်ပြုစုရေး ကော်မတီ၏ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ကရင်သောင်းကျန်းသူသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်စာစောင်တို့နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကေအင်န်ယူ ကြားဖြတ်ဗဟို (မန်းဘဇံအုပ်စု)သည် ကေအင်န်ယူ လမ်းစဉ်နှင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်တို့ကို ယှဉ်ပြသောဝါဒဖြန့်စာရွက်စာတမ်းများကို ကျေးရွာ များတွင် ဝေငှခဲ့သည်။၂(၂။အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏သောင်းကျန်းသူသမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၂၈ မှ ၃ဝ။) ယင်းစာရွက် စာတမ်းများတွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရအား မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒ ကျင့်သုံးသူ၊ သာသနာပြုကျောင်းများကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းယူသူ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ပိတ်ပင်သူအဖြစ် ရှုတ်ချပြီး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံစံကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ထားသည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် အကုန်ပိုင်းတွင်ကား ကေအင်န်ယူ ကြားဖြတ်ဗဟိုသည် ကေအင်န်ယူတပ်ဦး KNUF = KAREN NATIONAL UNION FRONT.အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ လက်အောက်ခံ တပ်များကိုလည်း ကေအင်န်အယ်လ်အေ KNLA = KAREN NATIONAL LIBERATION ARMY. အဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ကေအင်န်အယ်လ် ဦးစီးဌာနချုပ် G.H.Q = GERNERAL HEADQUARTERS. အောက်တွင် တပ်မနှစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်(ခေါ်)အရှေ့တိုင်းအတွက် တပ်မတစ်ခုနှင့် ကေအင်န်ယူပါတီ ကြီးစိုးနေသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် တပ်မတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လျာထား လိုက်သည်။ တပ်ခွဲနှစ်ခွဲကို တပ်ရင်းတစ်ရင်း၊ တပ်ရင်း နှစ်ရင်းကို တပ်မဟာတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး တပ်မ (၁) အောက်တွင် တပ်မဟာ (၅)ခု ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ တပ်မဟာ(၁)သည် သထုံနယ်မြေ၊ တပ်မဟာ(၂) သည် သံတောင်နယ်မြေ၊ တပ်မဟာ (၃)သည် ရွှေကျင်ကျောက်ကြီးနယ်မြေ၊ တပ်မဟာ(၆)သည် ကော့ကရိတ်ကြာအင်းဆိပ်ကြီးနှင့် ထားဝယ် နယ်မြေ၊ တပ်မဟာ(၇)သည် ဖာပွန်၊ လှိုင်းဘွဲ့နှင့် ကော့ကရိတ်နယ်မြေများကို အသီးသီးတာဝန်ယူ ကြမည်ဖြစ်ပြီး တပ်မ(၁)ဌာနချုပ်ကို မဲသဝေါ (ကြူအိပ်ခ်ျ-၅၈၂၉)တွင် ဖွင့်လှစ်သည်။ တပ်မ(၁) တပ်မမှူးမှာ ဗိုလ်မြဖြစ်သည်။ ကေအင်န်အယ်လ်အေ ကို အထောက်အကူပြုမည့် ကေအင်န်ဒီအို KNDO = KAREN NATIONAL DEFENSE ORGANIZATION. ကိုလည်း ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ကြသည်။၁ ၁။ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ သောင်းကျန်းသူသမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၃ဝ။
ကေအင်န်ယူတပ်ဦးတွင် ဥက္ကဋ္ဌမှာ မန်းဘဇံ ဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်း အာဏာကို ထိန်းချုပ်ထား သူမှာ ဗိုလ်မြဖြစ်သည်။ မန်းဘဇံသည် အစဉ်အလာရှိ သူ တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရသူဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်မြသည် ကေအင်န်အယ်လ်အေ နှင့် ကေအင်န်ဒီအိုအတွက် အောက်ပါမူများကို ချမှတ် စေခဲ့သည်။၂
(က) ကေအင်န်အယ်လ်အေအတွက် မူ(၅)ချက်
(၁) တပ်စိတ်ချေမှုန်းရေးမှ တပ်စုချေမှုန်းရေး။
(၂) ရဲချေမှုန်းရေးမှ တပ်ချေမှုန်းရေး၊ တပ်ညံ့ ချေမှုန်းရေးမှ တပ်မာချေမှုန်းရေး။
(၃) သာမန်လှုပ်ရှားနေသောဒေသတွင် အုပ်ချုပ် ရေးတပ်များချေမှုန်းရေးမှ တပ်မကြီးတပ်များ ချေမှုန်းရေး။
(၄) သာမန်လှုပ်ရှားနေသော ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး တပ်များချေမှုန်းရေးမှ ထိုးစစ်ဆင်နေသော တပ်များချေမှုန်းရေး။
(ခ) ကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့၏အဆင့်ဆင့်ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ပုံ
(၁) ကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့များသည် ဗဟို ကေအင်န်ဒီအိုဌာနလက်အောက်တွင်ရှိပြီး လိုအပ်သောညွန်ကြားချက်လုပ်ငန်းများကို ဆင့်ကဲအောက်ခြေအဖွဲ့အထိ ညွှန်ကြားသွား မည်။
(၂) ခရိုင် ကေအင်န်ဒီအို တာဝန်ခံနှင့်မြို့နယ် ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံများကို သက်ဆိုင်ရာ နှင့် မြို့နယ်ကေအင်န်ယူအစည်းအရုံးမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်၍ ကေအင်န်ဒီအို ဌာန၏အလုပ်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက် စေမည်။
(၃) မြို့နယ်ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံသည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အချိန်ပြည့်ကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာတိုင်းရှိ ကေအင်န်ဒီအိုအဖွဲ့များကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်ဖွဲ့စည်းပြီး ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်သွားရမည်။
(၄) ခရိုင်ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံသည် ခရိုင် အတွင်းရှိ အချိန်ပြည့် ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံ များနှင့် အချိန်ပိုင်းကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့များ ကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်ဖွဲ့စည်းပြီး အုပ်ချုပ် ကွပ်ကဲသွားရမည်။
(၅) ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံများ သည် ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကေအင်န်ယူ အစည်းအရုံး ၏ အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြရမည်။
(၆) ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာကေအင်န်ဒီအို တာဝန်ခံများနှင့်တပ်ဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင် ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာကေအင်န်ယူ အစည်းအရုံး၏ အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲမှုအောက် တွင်ရှိပြီး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်ကြရမည်။
(၇) ဗဟိုကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံသည် ကေအင်န် အယ်လ်အေ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်ရ မည်။ တိုင်း ကေအင်န်ဒီအိုတာဝန်ခံသည် ကေအင်န်အယ်လ်အေ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ခရိုင် ကေအင်န်ဒီအို တာဝန်ခံသည် ကေအင်န်အယ်လ်အေ၏ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ မြို့နယ် ကေအင်န်ဒီအို တာဝန်ခံသည် ကေအင်န် အယ်လ်အေ၏ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရ မည်။ ကေအင်န်အယ်လ်အေနှင့်တွဲ၍ စစ်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဆိုင်ရာစစ်ရေး တာဝန်ခံတပ်မှူး၏အောက်တွင်ရှိစေရမည်။
ဗိုလ်မြသည် ကေအင်န်ယူပါတီမှ ခွဲထွက်အုပ်စု အဆင့်သာ ရှိနေသေးသော ယင်းတို့၏ အင်အားစုများ အား ကေအင်န်ယူပါတီနှင့် တသီးတခြားစီ ကွဲပြား ခြားနားသွားစေရန် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကေအင်န်အယ်လ်အေကို အမြဲတမ်းတပ် အသွင် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး ကေအင်န်ဒီအိုအား ပြောက်ကျား တပ်များအဖြစ် ရည်စူးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် ကေအင်န်ယူညီလာခံကို ဗဟို၌ကျင်းပခဲ့ပြီး မန်းဘဇံက သဘာပတိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်မြက ဒုတိယ သဘာပတိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သန်းအောင်က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖဒိုဂေဒွဘွားနှင့် ဖဒိုထွန်းဖေတို့က မှတ်တမ်းတင်မှူးများအဖြစ်လည်း ကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းညီလာခံကို တောနော်တွင်ကျင်းပပြီး (၇)ကြိမ်မြောက်ညီလာခံဟု သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ပဲခူး ရိုးမမှ ကိုယ်စားလှယ်များမပါဝင်သောကြောင့် ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံးညီလာခံဟုသာ ခေါ်ဆိုသတ် မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ကေအင်န်ယူတပ်ဦး အခေါ်အဝေါ် နှင့် ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရန် ကိုယ်စားလှယ်များက တောင်းဆိုရာ မန်းဘဇံက တပ်ဦး ဟူသော ဝေါဟာရ ကြောင့် ကွန်မြူနစ်ဟု သံသယမဖြစ်စေလိုကြောင်း၊ တပ်ဦးအမည်ပါသော်လည်း မူနှင့်လုပ်ငန်းများ ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ပြည်ပြေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြရာတွင် ယာယီ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သောကြောင့် ကေအင်န်ယူ နယ်မြေကို ဖြတ်သန်းခွင့် ပေးရန်နှင့် ပြည်ပြေးအမာခံ စခန်းများကို ပြည်ပတွင်ပင် ထားရှိစေ၍ စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကေအင်န်ယူတပ်ဦးသည် စတင်ဖွဲ့စည်းခါစဖြစ် သည့်အပြင် ကရင်သောင်းကျန်းသူများအတွင်း လက်ဝဲ ဝါဒ၊ လက်ယာဝါဒ(ကွန်မြူနစ်နှင့်လူမျိုးရေး)အငြင်းပွား မှုများ၊ ပဋိပက္ခများက ဂယက်ရိုက်ခတ်ဆဲဖြစ်နေသော ကြောင့် ပြဿနာများစွာရှိနေသည်။ အစိုးရအား တိုက်ခိုက်ရေး၊ ကေအင်န်ယူပါတီနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီအပေါ် သဘောထား၊ ပြည်ပြေးများအား လက်ခံရေး၊ လက်မခံရေးတို့မှာ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေး စရာများဖြစ်နေသည်။ သို့နှင့်ညီလာခံသည် သုံးလခန့် ကြာမြင့်သည်အထိ ကျင်းပခဲ့ရသည်။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်တွင် ၁၉၇ဝ/ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အတွက် ကေအင်န်ယူ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြ သည်-
(၁) မန်းဘဇံ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန
(၂) ဗိုလ်မြ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေး
(၃) သန်းအောင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊
(၄) မောင်မောင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့် စည်းရုံးရေးဌာန
(၅) ဖဒိုသာပြည့် သစ်တောနှင့်လယ်ယာဌာန
(၆) ဖဒိုချာလေ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဌာန၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဌာန
(၇) ဖဒိုဂေဒွဘွား ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကယ်ဆယ် ရေးဌာ
(၈) ဖဒိုဘောယူဖော ကေအင်န်ဒီအိုဌာန
(၉) ဖဒိုဖူးလယ်ဝါး အခွန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာန
(၁ဝ) ဖဒိုဖူးစံဝေး တရားရေးဌာန
(၁၁) ဖဒိုသာမောင် တရားလွှတ်တော်ချုပ်
(၁၂) ဖဒိုစကော်ထူး တရားလွှတ်တော်ချုပ်
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်တွင် အေအင်န် ယူအက်ဖ်သည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီတို့နှင့်အတူဆွေးနွေးရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု (တညလ) United Liberation Front တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စင်စစ်သုံးပါတီတို့သည် ကိုယ်စီကြုံနေရသောအခက်အခဲများ ယာယီပြေလည် စေခြင်းအလို့ငှာ ယာယီမဟာမိတ်ဖွဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိအကျိုးစီးပွားများကိုသာ အဓိကထား၍ သဘောတူ ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သုံးပါတီတပ်ပေါင်းစု၏ အခြေခံမူ၁(၁။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ သောင်းကျန်းသူသမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၃၃။) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(၁) တစ်ပါတီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ တူတာတွဲ လုပ်၊ မတူတာခွဲလုပ်ရေးသဘောပင်ဖြစ်ခြင်း။
(၂) အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒများ တစ်ထပ်တည်း ရှိမှ တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့ရမည်ဟူသော တော်လှန် ရေးတပ်ပေါင်းစု တည်ဆောက်ရေးသဘော တရားမရှိခြင်း။
(၃) တပ်ပေါင်းစု တစ်ရပ်တည်ဆောက်ရာတွင် တစ်ပါတီအပေါ် စိုးရိမ်မှုကို အဓိကရှေ့တန်း မတင်ဘဲ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နည်းပရိယာယ်တိုက်ပွဲအတွက် မည်ကဲ့သို့ အသုံးချနိုင်မည်ကို လက်တွေ့ကျကျတွေ့ရှိ ရန် အရေးကြီးခြင်း။
(၄) အထက်ပါသဘောတရားများအတိုင်း ခံယူ ပြီး တပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့စည်းသော်လည်း အမျိုးသားရေးသတိ အမြဲရှိရမည့်အပြင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိဟု သဘောပေါက်ခံယူ သောနေ့တွင် အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၏ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မူအရ ခွဲထွက်နိုင်ခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ အခြေခံမူများကိုကြည့်ပါက သုံးပါတီတပ်ပေါင်းစုသည် ခိုင်မာခြင်းမရှိဘဲ ယာယီ သဘောမျိုး၊ အမည်ခံသဘောမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ပေါင်းစုဝင်များ သည် အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွဲ၍ ဆောင်ရွက်လိုမှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အချိန်မရွေးခွဲထွက်နိုင်ခြင်း ကြောင့် အချိန်မရွေးပင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး တိုက်ခိုက် နိုင်သည်။ အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒမှာလည်း တစ်ထပ်တည်းမရှိခဲ့ပေ။ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရခြင်း အကြောင်းရင်းများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာခဲ့သည် -၂
(၁) ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုပုံစံ ပါလာမည်ကို ဒီမိုကရေစီပါတီက လက်ခံခြင်း။
(၂) လူမျိုးကြီးငယ်သဘောမဟုတ်ဘဲ ဗမာအမျိုး သားများကိုလည်း လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုရန်ဖြစ်ခြင်း။
(၃) အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်၁၁ချက်အနက်၁ဝချက်ကိုသဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ခြင်း။**(သဘောမတူညီသော အချက်မှာ ကရင်ပြည်နယ်ကို လက်ရှိအနေအထားမှ တိုးချဲ့ရေးနှင့် ခွဲထွက်ခွင့်ပြုရေးဖြစ် သည်။)
(၄) ကွန်ဂရက်သဘောတူညီချက်အရ တပ်ပေါင်း စုဖွဲ့စည်းရေးမူ ငါးချက်တွင် လေးချက်ကို သဘောတူညီခဲ့ခြင်း။
(၅) နည်းပရိယာယ်တိုက်ပွဲတာဝန်အရ ဘုံရန်သူ ကို တညီတညွတ်တည်း ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရန် သဘောတူညီခြင်း။
သုံးပါတီတပ်ပေါင်းစုတွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီသည် ဦးဆောင်သူသဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သို့သော် ဦးနုတို့လူစုသည် မြန်မာပြည်အတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် ကေအင်န်ယူ၏ထောက်ခံမှုမရလျှင် မဖြစ် သောကြောင့် ကေအင်န်ယူ၏ လိုလားချက်များကိုသာ အဓိကလိုက်လျောခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက် အများစုမှာ မန်းဘဇံတို့၏အလိုတိုင်းသာ ဖြစ်သည်။ အာဏာရရှိလျှင် မန်းဘဇံသာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဦးနုမှာ ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခွင့် မရပေ။
၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် ကေအင်န်ယူ စာစဉ်(၈)တွင် တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင် များ၏တာဝန် ကိုးရပ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ ထားပြန်သည်။၁(၁။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ သောင်းကျန်းသူ သမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၃၄။)
(၁) တပ်ပေါင်းစုလုပ်ငန်းကို ကေအင်န်ယူတပ်ဦး ၏ရှေ့ဆောင်ညွှန်ကြားမှုအရ တိကျစွာလုပ် ဆောင်ရမည်။
(၂) တပ်ပေါင်းစုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကေအင်န်ယူလုပ်ငန်းများကို မနှောင့်နှေး စေရ။
(၃) အခြေခံအားဖြင့် ကေအင်န်ယူကြီးထွားမှ တပ်ပေါင်းစုကြီးထွားမည်ကို သဘောပေါက် အလေးအနက်ထားရမည်။
(၄) ကေအင်န်ယူလုပ်ငန်းအဝဝကို တပ်ပေါင်းစု လုပ်ငန်းနှင့် စနစ်တကျ ဆက်စပ်ပေးရမည်။ (တပ်ပေါင်းစု လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် မိမိတို့ အဖွဲ့လုပ်ငန်းကိုပင် အလေးမထားဘဲ ပေါ့လျော့ခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်ကို သင်ခန်းစာယူခြင်းဖြစ်သည်။
(၅) တပ်ပေါင်းစု လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကေအင်န်ယူကို ဆန့်ကျင်သောလုပ်ငန်း မဟုတ်ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စည်းရုံးရေးဝါဒဖြန့်မှုများတွင် ကေအင်န်ယူ မူနှင့် ပဋိပက္ခမဖြစ်ရန် သတိပြုရမည်၊ ကေအင်န်ယူ မူကိုဆန့်ကျင်ထိခိုက်လာပါက လိုအပ်သလို ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းနှင့် သတိပေးခြင်းများ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရမည်။
(၆) တပ်ပေါင်းစုမပြိုကွဲရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြရမည်။
(၇) တပ်ပေါင်းစုကိစ္စ (ဥပမာ-ပြည်သူ့ပြည်ချစ်ပါတီ *(ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ(ပီဒီပီ)သည် နောင်တွင် ပြည်သူ့ပြည်ချစ်ပါတီ(ပီပီပီ)ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။)(ပီဒီပီ)သို့ သွားလိုသူ မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ လူတစ်စုနှင့်တပ်ဖွဲ့များ မိမိဒေသ သို့ ရောက်လာပါက) စနစ်တကျဆန်းစစ်ပြီး ဗဟိုသို့အကြောင်းကြားရမည်။ လက်နက် မှန်သမျှကို သိမ်းဆည်းရယူရမည်။
(၈) တပ်ပေါင်းစုပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့် ခရိုင် အတွင်း မည်သည့် အခက်အခဲရှိလာသည်ကို ဗဟိုသို့ လိုအပ်သလို တင်ပြရမည်။
(၉) တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းခြင်းသည် အကျိုးရှိသည့် အတွက် ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်သလို အကျိုးမရှိ တော့ပါက ကေအင်န်ယူသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကို အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါအချက်များကား တပ်ပေါင်းစုနှင့် ပြည်ပြေးများအပေါ် ကေအင်န်ယူတပ်ဦး၏ သဘော ထားပင်ဖြစ်သည်။ စင်စစ် သုံးပါတီအဖွဲ့ဝင်များသည် မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်ကြသည်ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချခြင်း မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မန်းဘဇံနှင့် ဗိုလ်မြတို့သည် ပြည်ပြေးများနှင့်ပတ်သက် ၍ မျက်နှာသာမပေးဘဲ မိမိတို့က အပေါ်စီးရနေစေရန် သဘောတူညီချက်များ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက် ၍ ပြည်ပြေးများကို ခုတုံးလုပ်ရေးနှင့် လောလောဆယ် ရန်သူအဖြစ် စစ်မျက်နှာနောက်တစ်ဖက် ထပ်မဖွင့်ရ ရေးသာလျှင် ကေအင်န်ယူ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ကေအင်န်ယူပါတီသည် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် လုံးဝပူးပေါင်းနေပြီဖြစ်သည်။ ကေအင်န်ယူ ညီလာခံကျင်းပနေစဉ် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ပင် ကေအင်န်ယူပါတီမှ ဗိုလ်ချုပ်ကျင်ဖေ နှင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုတို့သည် ကြို့ပင် ကောက်မြို့နယ်၊ ဝိုင်းရွာ(ကြူအေ-၁၉၁၇)၊ ချောင်း စောက် (ကြူအေ-၂ဝ၁၈) ဒေသများတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တပ်မဟာအဆင့်တွင်လည်း ကျော်မြသန်းနှင့် မန်းဘဇံသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မကျူးကျော်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းရေးတို့ကို ဆွေးနွေးထားကြသည်။ ကေအင်န်ယူပါတီဗဟိုသည် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ပဲခူးရိုးမသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဆက်သွယ် ပြီး ကရင်နီ၊ ကယန်းတို့နှင့် ညီညွတ်ရေးကိုလည်း ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျောက်ကြီးနယ်လုပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် နော်ပဲဒိုး(ကြူ-၃၈၂၂)၌ ကေအင်န်ယူပါတီမှ ဗိုလ်ချုပ်မြမောင်နှင့် ကေအင်န်ယူတပ်ဦးမှ ဗိုလ်မြ၊ ဒေဝတို့က ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ရာ ကေအင်န်ယူပါတီမှ အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော် ကေအင်န်ယူပါတီသည် ဗိုလ်မြအုပ်စုက အင်အားသုံးလာမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ပဲခူးရိုးမသို့ ရွှေ့ပြောင်းကာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်း လိုက်သည်။၁(၁။ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ သောင်းကျန်းသူများ သမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၃၅။)
ဦးနုသည် ကေအင်န်ယူ တပ်ဦးအား လိုလားချက် များကို လိုက်လျော၍ ချဉ်းကပ်ခဲ့ရသည့်အပြင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကိုလည်း ငွေသိန်း ၃ဝ ကျော်လာဘ် ထိုးခဲ့ရသည်။ ပြည်ပြေးများသည် ကေအင်န်ယူနှင့် မွန် ပြည်သစ်ပါတီတို့၏နယ်မြေများကိုအခြေခံ၍ ပြည်တွင်း သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြချိန်တွင် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ ဝါဒဖြန့်မှုများကိုလည်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေသည်။၂ (၂။ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏သောင်းကျန်းသူများသမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၂၅ မှ ၂၆။)
Posted by Myanmar Political Research Organization at 8:23 AM